Olole nadaafadeed oo ay soo abaabuleen ururada bulshada oo ka bilawday Buuhoodle. – Radio Daljir
Olole nadaafadeed oo ay soo abaabuleen ururada bulshada oo ka bilawday Buuhoodle.
Maajo 18, 2011 12:00 b 0
Buuhoodle, May 18 – Magaalada Buuhoodle ee xarunta Gobolka Cayn ayaa maanta waxaa laga bilaabay olole nadaafadeed oo baaxad weyn oo ay soo qaban qaabiyeen uradda bulshadda ee magaalada Buuhoodle.
Ololahani oo ah mid sanad kasta ay qabtaan maanta oo kale shacabka magaalada Buuhoodle ayaa lagu micneeyey in hindisihiisa ay ka danbeysey arin siyaasadeed oo lagaga soo horjeedo maamulka Somaliland oo isagu maanta oo kale u dabaal dega maalintii la aasaasay, ama ay ku dhawaaqeen goosashada.
Wadooyinka magaalada ayaa maanta waxaa la arkayey baabuur tira badan oo u badnaa nooca daabula dhagxanta, ciida, Iyo qashinka ee loo yaqaano Iska-rogooyinka, waxaana baabuurtaasi lagu daabulayey shaqin tira badan oo dadweynaha deegaanku ay ka aruuriyeen dhamaan shawaariicda magaaladda Buuhoodle.
Sidoo kale waxaa lagu arkayey dariiqyada magaalada baabuur nooca xaragada ah oo lagu xidhay cod dheereeyayaal, (microphones) ay dadka ku wacyigelinayeen inay qashinka banaanka isaga soo saaraan si markaasi loogu daabulo baabuurta loo diyaarshey.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka, gaar ahaana kuwa ololaha wadey oo idaacada Daljir la hadlay ayaa waxay tilmaameen in ololahani uu yahay mid sanad kasta maanta oo kale la qabto, iyadoo la sheegay in lagu mucaaradayo dabaal-degga maanta oo kale ay Somaliland u samayso maalinta goosashadda.
Ma aha markii ugu horeysey oo olole kan la mid ah ay qabtaan qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana ololuhu ku soo aadayaa xili maanta meelo badan oo ka mid ah gobollada Somaliland looga dabaal degayo maalinta 18-ka May.
Khadar C Ismaaciil
Gen. Yusuf Axmed Khayr oo sheegay in ciidanka Puntland ay ku sugan yihiin fadhiisimadoodii Galgala.
Guddoonka baarlamanka federaalka ah oo u muddeeyey doorashada hoggaanka dalka badhtamaha July.